Diiwaan-gelinta ilmahaaga | Refugee Malaysia
Helitaanka shahaado dhalasho iyo ku darista ilmaha kuu dhasha fayl-kaaga UNHCR.
SIDEE LOO DIIWAANGALINAYAA DHALASHADA ILMAHA?
Hadii uu hada kuu dhashay ilmo, waa inaad diiwaan-geliso dhaladiisa ama dhalashadeeda oo aad u soo qaado shahaadadooda dhalashada, si aad ugu darto fayl-kaaga. Ma jirto wax lacag ah haddii aad arintan ku sameyso 60 maalmood gudahood ee dhalashada ilmaha ka dib. 60 maalmood kadib, waxaa lagaa qaadi karaa lacag.
Tallaabada 1: Hel foomamka Diiwaangelinta Dhalashada.
Ka hel foomamka arjiga isbitaalka uu ilmuhu ku dhasho, ama ‘Jabatan Pendaftaran Negara’ (JPN), oo ah Waaxda Diiwaangelinta Qaranka ee Malaysia (NRD).
Tallaabada 2: Booqo Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) adigoo wata foomamka oo la buux buuxiyay iyo dukumiintiyada loo baahan yahay.
Si aad u diiwaangeliso dhalashada cunugga waxaad u baahan doontaa inaad keento:
Qaar ka mid ah aqoonsiyadaan: Kaararka UNHCR / kaararka beesha / baasaboorada –waxaa iyo nuqulo;
Shahaadada guurka, shahaadada furriinka ee waalidka (haddii ay khuseyso) – asalka iyo nuqulka;
Xaqiijinta dukumintiga dhalashada ee isbitaalka, ama warbixinta booliiska haddii ilmaha lagu dhalay guriga- asalka ah;
Foomka codsiga diiwaangelinta dhalashada – asalka iyo nuqulka (https://www.jpn.gov.my/wp-content/uploads/2014/07/jpnlm01.pdf, tixraac kaliya)
Buugga la-socodka Uurka (buugga baaritaanka hooyada) – asalkah
Haddii aad tihiin lamaane aan muslim ahayn oo aan is qabin, qofka sheeganaya inuu yahay aabaha ilmaha waa inuu la saxiixaa diiwaanka dhalashada isaga iyo hooyada ilmaha. Haddii kale, macluumaadka aabbaha laguma dari doono shahaadada dhalashada.
Waxaan kugula talin lahayn inaad hesho caawinta qof ku hadla Malay-ga si uu ku caawiyo haddii ay suurtogal tahay.
Haddii ilmuhu dhasho inta hooyadu xidhan tahay, waaxda socdaalka ee xaruntaas lagu hayo waa inay ka caawinto diiwaangelinta dhalashada iyo helitaanka shahaadada dhalashada ilmaha, maadaama hooyada iyo ilmaha labaduba ku jiraan gacanta maamulka socdaalka.
Yaa samayn kara?
Waalidiinta, mas’uuliyiinta sharciga ah, ama qof kasta oo aqoon u leh dhalashada ilmah ayaa diiwaangelin kara dhalashada hadii ay keenaan dukumentiyada loo baahan yahay.
Waa Xagee Waaxda Diiwaangelinta Qaranka (JPN)?
Waxaad booqan kartaa laan kasta ku qoran halkan: https://www.jpn.gov.my/alamat-cawangan/
Haddii aad awoodid inaad ka diiwaangeliso ilmahaaga Kuala Lumpur, waxaan ku talin lahayn inaad booqato xafiiskan:
Sidee loogu daraa ilmahaaga cusub Faylkaaga UNHCR?
Haddii aad hore uga diiwaangashan tahay UNHCR, waxaad ku dari kartaa ilmahaaga cusub faylkaaga UNHCR.
Tallaabada 1aad: Qaado shahaadada dhalashada
Markaad raacdo tallaabooyinka kor ku xusan si aad u diiwaangeliso ilmahaaga cusub, waxaad heli doontaa shahaadada dhalashada oo aad u baahan tahay si aad ugu darto ilmahaaga Faylkaaga UNHCR.
Tallaabada 2aad: Booqo xafiiska UNHCR
Shakhsiyaadka ma soo booqan karaan xafiiska UNHCR ballan la’aan, laakiin ku darista ilmahaaga cusub faylkaaga, tan waa la oggol yahay. Waxaad booqan kartaa xafiiska adiga iyo dhallaankaaga Isniinta ilaa Jimcaha inta u dhexeysa saacadaha 8 subaxnimo – 11ka subaxnimo ujeeddadan. Waxaa lagaa rabaa inaad keento dukumentiyadaada UNHCR iyo sidoo kale shahaadada dhalashada ilmahaaga.
FIIRO GAAR AH:COVID-19 dartiis, xafiiska UNHCR hadda ma aqbalayo iska imaanshah balan la’aan. Fadlan ha u imaan Xafiiska UNHCR ballan la’aan. Arrimaha la xiriira ku darka xubnaha qoyska, fadlan la xiriir Khadka Diiwaangelinta 017-614 3810 laga bilaabo 8.00 subaxnimo ilaa 4.00 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha.